युगसम्बाद साप्ताहिक - हामीसंग चाहिं सहमति गर्नुपर्दैन ?
Friday, 11.16.2018, 02:23am (GMT+5.5) Home Contact
हामीसंग चाहिं सहमति गर्नुपर्दैन ?
Tuesday, 03.17.2015, 12:32pm (GMT+5.5)
- चित्रबहादुर केसी– अध्यक्ष राष्ट्रिय जनमोर्चा
० राजनीतिक दलहरू सहमतिका लागि फेरि संवादमा जुटेका छन् । सहमतिको सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
सहमति हुने भए पनि पहिले नै भैहाल्थ्यो नि । नियत नै सहमति नगर्ने भएपछि तुरुन्तै सहमतिको सम्भावना त देखिँदैन ।
० किन सम्भावना नदेख्नुभएको ? तपाई पनि त आजको दिनमा सहमतिकै पक्षमा हुनुहुन्छ होइन र ?
आआफ्नो स्वार्थले थिचिरहेको छ । नेताहरूलाई राष्ट्र र जनताको स्वार्थले प्रभाव पारेकै छैन ।
० उसो भए नेताहरूले किन राष्ट्र र जनताको चाहना अनुसार काम गर्न नसकेका होलान् ?
राष्ट्र र जनताको चाहना अनुसार काम गर्दा नेताहरूको आफ्नो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पूरा हुनै सक्दैन । अब गुटगत स्वार्थ पूरा हुन्न । जनता र राष्ट्रको सेवा गरेको भए पो त्यो कुरा हुन्थ्यो तर यहाँ त व्यापार भैरहेको छ । जसलाई व्यक्तिगत र गुटगत स्वार्थ पूरा गर्नुछ, राजनीतिबाट आफूलाई कुलिन बनाउनु छ, स्थापित गर्नु छ अब त्यसो गरेपछि कहाँबाट कुरा मिल्छ ?
० देशलाई त संविधान चाहिएको छ नि ?
देशलाई संविधान चाहिएर मात्र त भएन नि, संविधान दिनुपर्नेहरूलाई त चाहिएको छैन । संविधान चाहिए पनि उनीहरूको आफ्नो अनुकुलको संविधान चाहिएको छ । उनीहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ र गुटगत स्वार्थ पूरा हुने खालको संविधान चाहिएको छ र त्यो अरुले मानिदिनुपर्ने छ ।
० संविधान त देशको लागि चाहिएको हो, नेताको लागि त होइन नि ?
देश र जनताको लागि संविधान लेखिने भएदेखि त अघिल्लो दुई वर्षमै लेखिसकिन्थ्यो नि ।
० तपाईहरूले पनि त्यसको लागि पहल त गर्नुभएन नि ?
हामीले टाउकै फोरे पनि केही हुनेवाला छैन । नेपाली जनताले जसलाई संविधान लेख्न भनेर निर्णाय मत दिएका छन् उनीहरूले पो संविधान बनाउनुपर्याे ।
० संविधान जारी गर्न काँग्रेस र एमालेले के गर्नुपर्छ ?
कांग्रेस एमाले जातीय साम्प्रादायिकहरू र क्षेत्रीय साम्प्रादायिकहरूसंग अब लतारिनु हुँदैन । अहिलेसम्म लतारिएका छन् । गिरिजाबाबु लतारिनुभयो अब गिरिजाबाबुले बसालेको सिलसिला अहिलेसम्म कायमै छ । संविधानसभामा प्रतिपक्ष हुँदैन भनिएको छ तर आफ्नो एजेण्डा कांग्रेस र एमालेलाई बोकाएर हिंडाउने षड्यन्त्रकारी खेल जो भैरहेको छ त्यसमा कांग्रेस र एमाले लतारिनुहुँदैन । यी दुई पार्टीहरू लोकतान्त्रिक पद्धतीको पक्षमा दृढतापुर्वक उभिनुपर्छ ।
० संविधान त सम्झौताबाटै जारी गर्ने होइन र ?
सम्झौता त राष्ट्र र जनताको हितमा बन्ने संविधानमा गर्नुपर्छ नि । जातीय र क्षेत्रीय संविधान बनाउने पक्षमा, मुलुकको राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डतामा क्षतविक्षत हुने खालको क्रियाकलापमा सम्झौता गर्नहुन्छ त ?
० आजको दिनमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच सहमतिकै संविधान जारी गर्नुको विकल्प छैन भनिन्छ नि ?
सहमति नै गर्ने हो भने राष्ट्रिय जनमोर्चासंग पनि सहमति गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? हामी राजनीतिक दल हैनौं र ?
० तपाईको पार्टीसंग सहमति गर्न त जनमत पनि हुनुपर्याे नि ?
त्यसो हो भने २० दलमा भेला भएकाहरू कति कति जनमत भएका छन त ? भीडलाई हेरेर मात्र निर्णय गर्ने हो भने त जे गरे पनि भैगो नि ।
० ३० दलीय मोर्चाले त सहमति, सहकार्य र समझदारीमै अगाडि बढ्नुपर्छ भनेको छ नि ?
त्यसलाई त कसैले पनि इन्कार गरेकै छैन । तर सहमति आफ्नो पक्षमा हुनुपर्याे, आफूले जुन राजनीति बोकेर हिँडेको छ त्यसमा सहमति हुनुपर्याे भन्ने छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयता नेपाली जनताको लागि विदेशीले बाधिदिएको गलपासो हो यो गलपासो फाल्न नेपाली जनता चाहीँ मैदानमा उत्रिनुपर्छ, भनिरहेको छ । यसकारण राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने झै यो मुलुकमा संघीयता हुनै सक्दैन भन्ने कुराम अरु पार्टीले सहमति गर्ने कि नगर्ने त ?
० किन संघीयता हुन सक्दैन ? संघीयता त नेपाली जनताको एजेण्डा होइन र ?
संघीयता नेपाली जनताको एजेण्डा हुँदै होइन । विदेशीले थोपरिदिएको एजेण्डालाई तपाईं कसरी नेपालीको एजेण्डा भन्न सक्नुहुन्छ ?
० उसो भए संघीयताको पक्षमा किन मान्छेहरू फागुन १६ गते खुल्लामञ्चमा आए त ?
होइन, पशुपतिमा पनि मान्छेहरू जम्मा हुन्छन नि शिवरात्रीमा । मान्छे जम्मा हुँदैमा सबै कुरा हुन्छ र ? त्यो जमघटको उद्देश्य पनि त हुनुपर्याे नि ।
० संघीयतामा जाने भनेरै नै मधेशवादी दलहरूसंग त सम्झौता भएकै हो नि ?
सम्झौता जसले गरेको थियो त्यसैसंग पूरा गर्नुपर्दथ्यो नि त । जोसंग जति वेला सम्झौता भएको थियो त्यतिबेलै पुरा गर्नुपर्दथ्यो । अघिल्लो चार वर्ष के खेलाएर बसेका थिए त ? अहिले सडकमा कुर्लिनेहरूलाई त्यतिवेला जनताले बुहमत दिएकै हुन नि के हेरेर बसेका थिए त्यतिवेला ? यहाँ त के देखिएको छ भने ‘तँ आउँदा मोहीको पानी पाइनस कमराको हातमा दही’ भनेजस्तै भएको छ । त्यतिवेला संविधान जारी गर्ने ताकत थिएन र ? जनताले त्यत्रो मत दिएको बेलामा चाहिं सिन्को भाँच्न नसक्ने त्यतिवेला सत्तामा सामेल भएर लुटमा समय विताउनुपर्ने अनि अहिले आएर पहिलो संविधानसभाभन्दा पहिले नै गरेका सहमति तथा सम्झौताहरू लागु नभए संविधान जारी हुन्न दिन्नौं भनेर मुलुकलाई यो अवस्थामा पुर्याउन पाइन्छ ?
० तर पनि विगतमा भएका सम्झौताहरूलाई विसर्न मिल्छ र ?
कसले विर्सेको छ र ? अब त प्रक्रियामा गएर टुँगो लगाउनुपर्छ । पहिले जुनसुकै कारणले सम्झौता अकरनामा गरेको भए पनि जोसंग गरेको थियो त्यहीसित पुरा गर्नुपर्दथ्यो । विगतमा शासकहरूले पनि दर्जनौ अकरनामा गरेका थिए अब ती सबै पूरा गर्न सकिन्छ र ? ती सबै अकरनामा पूरा गर्दा मुलुकमा संविधान बन्न सक्छ र ?
० उसो भए हाम्रो देशले संविधानसभाबाट सितिमिति संविधान नपाउने भयो होइन ?
धेरै कठिन छ । अब प्रक्रियामा जानै हुन्न । बहुमतीय प्रक्रियामा गए खबरदार भनेपछि अनि कहाँबाट मुलुकले संविधान पाउँछ त ? जसले जस्तो एजेण्डा बोेकेको छ त्यो एजेण्डा पूरा नभए अनि संविधानसभाबाट संविधान आउँछ त ? अनि कहाँबाट देश समृद्धि हुन्छ ? जनताको लागि सुख समृद्धि ल्याउन हो र यो संघीय प्रणाली ? अरु सबै कुरा मिलेको छ तर संघीयता वा राज्य पुनःसंरचनामा कुरा अड्किएको छ । तपाईले देख्नुभएको छैन र कलैया सिमराको घट्ना ? त्यति त गर्न नसक्नेले के संघीय राज्य बनाउन सक्छन त ? त्यो त सामान्य विकेन्द्रीकरण हो ।
० संघीय प्रणालीमा जाँदा राष्ट्रमा विकास त हुन्छ नि ?
सुडानमा विकास भएको छ ? नाइजेरियामा विकास भएको छ ? रुवाण्डामा विकास भएको छ र ? अमेरिकामा त आवश्यकत्ता थियो र पो विकास भयो । त्यहाँ पूर्वाधार थियो र पो आज विकास भएको छ । अमेरिकामा सफल भयो, अष्ट्रेलियामा सफल भयो भनेर नेपालमा पनि हुन्छ भनेर जिद्धि गरेर हुन्छ त ? अमेरिकामा जातीय राज्य मागेका थिए र ? जर्मनीमा के क्षेत्रीय राज्य छ र ?
० उसो भए अहिले हलो अड्किएको भनेको नै सघीयतामा हो ?
एकदमै हो । नेपाली जनताले संघीयता खारेज गर भनेर सडकमा नउत्रिएसम्म संघीयताकै कारणले देश रहने छैन ।
० संघीयताको विरोधमा जनता सडकमा आउलान र ?
आउँछन । जनताले देखिसकेका छन् । ढिलो चाँडो आउँछन् । एकदिन आउँछन् । जनताले के कारणले संविधान आउन सकेन भन्ने कुरा बुझिसकेका छन् । संविधानको अन्तर्वस्तु त्यसमा पनि संघीयताको कारणले हो भन्ने कुरा जनताले बुझिसकेका छन् । त्यसैले नेपाली जनताले संघीयता खारेज गर्न सकेनन् भने संघीयताले नै यो देश खारेज गर्नेछ । संघीयताले देशलाई नराम्रोसंग भड्खालोमा हालेको छ । संघीयता खारेज हुनैपर्छ । प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रिकरणको सिद्धान्तअनुसार नै संविधान बनाउनुपर्छ ।
० तपाईको पार्टीसंग त जनता छैनन् नि ? अनि जनता कसरी सडकमा आउँछन त ?
उनीहरूको पाइन पनि देखियो नि । उनीहरूसंग जनता थिए भने खोई त राष्ट्रलाई पार लगाएको ? मुलुकलाई संविधान दिएको ? मुलुकलाई अग्रगमनतिर लगेको ? त्यसैले काँग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेशवादी दलहरूको पाइन त देखियो नि ।
० उसो भए अब तपाई मन्त्री बन्न तयार भएर देशलाई निकास दिनोस् न त ?
मन्त्री बन्ने र कमाउनेको खाँचो यहाँ छैन । मुलुकलाई यो अवस्थामा लैजानेहरूको खाँचो छैन । खाँचो त यो जुन विकृति विसंगति छ, त्यसको विरुद्धमा नेपाली जनतालाई संगठित गरेर अघि बढाउनुपर्ने छ । मलाई कसैले मन्त्री बनोस् भन्छन् भने मेरो उहाँहरूलाई धन्यवाद छ । यहाँ मुलुकमा मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र नेताहरूको खाँचो भएर त्यस्तो भएको होइन । यहाँ त जो मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र नेता भए जो प्रतिपक्षी भए उनीहरूको संस्कार, चरित्र राम्रो नभएर यस्तो भएको छ ।